Nyocha site na TRF | Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ: Ịhụnanya, Mmekọahụ na Intanet
Home gbasara Anyị Nnyocha site TRF
Ndị otu na Ngwongwo Ụgwọ na-etinye aka na nchọpụta na ndị mmekọ na UK na USA. Anyị na-arụkọ ọrụ nke ọma na ndị ọkachamara neuroscience na mahadum dị elu na ndị ọkachamara n'ihe banyere ahụ riri ahụ na ntọala. Nke a bụ ụfọdụ nchọpụta mbụ anyị bipụtara. Ọ bụ na magazin ndị a na-enyocha na ndị ọgbọ.
Ihe ngosi 'ihe ngosi'
Otu n'ime akwụkwọ anyị Yokohama na-ebipụta ugbu a na-emeghe-ohere, akwụkwọ nyocha nke ndị ọgbọ. Akwụkwọ akụkọ ahụ bụ Itinye aka na “Manifesto maka Njikọ Ihe Ntinye Europe na Ntanye Nsogbu nke Internetntanetị" site na Mkpa iche nke Ọkachasị na Ọkachamara na andlọ Ọrụ Ihe Ndị Ego Elebara Anya na Nsogbu Elele. O weputara aro TRF maka nyocha a choro n’ime afo iri n’abia. Ihe omimi akụkọ n’elu akwụkwọ dị ebe a.
Na June 2019 TRF gosipụtara na Nzukọ nke 6 nke International na Yokohama, Japan. Anyị nyefere akwụkwọ nkwonkwo abụọ na ngalaba ahụ Omume mmekọahụ na omume ndị ọzọ na-abawanye uru. Mary Sharpe kwuru okwu na ya Ihe ịma aka nke ịkụziri ụmụ akwụkwọ banyere nchọpụta banyere ịṅụ ọgwụ ọjọọ. Darryl Mead nyere Izizi Ihe ngosi maka netwọk ndị Europe na-eme nchọpụta iji Nyocha Ịntanetị na-enwe nsogbu dịgasị iche iche nke ndị ọkachamara na ndị ahịa na-emetụta nsogbu ndị na-akpali agụụ mmekọahụ.
Akwụkwọ ọhụrụ anyị bụ Ihe na-akpali agụụ mmekọahụ na Mmekọahụ Mmekọahụ na 5th International Conference on Behavioral Addictions. Emere ogbako a na Cologne, Germany na April 2018. E bipụtara akwụkwọ ahụ Mmekorita nwoke na nwoke na nwanyi online na 18 March 2019. Anyị nwere ike ịnye njikọ na mbipụta a na-ebipụta na arịrịọ. Ihe odide nke odide a sitere na ResearchGate.
Ozi ogbako sitere na Cologne zoro aka na mbụ anyị gosipụtara na mpaghara a. Ọ dị Ịgwa ndị ọkà mmụta sayensị na-ahụkarị ahụ riri ahụ na ndị na-ahụ maka ịntanetị.
A na-ede akwụkwọ a Ihe na-akpali agụụ mmekọahụ na Mmekọahụ Mmekọahụ na 4th International Conference on Behavioral Addictions. E bipụtara ya Mmekorita nwoke na nwoke na nwanyi online na 13 Septemba 2017. Ọ pụtara na mbipụta na Mpịakọta nke 24, Nọmba 3, 2017. Nkọwa ndị ọzọ gụnyere nyocha na nke a na-adịghị ahụ anya dị na TRF Blog. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịpị otu isiokwu a, biko edegara anyị akwụkwọ Bịanụ na Touch na ala nke ibe a.
Nlereanya Ịntanetị na Mmejọ Mmekọahụ
Mary Sharpe, Onye isi oche nke wardgwọ Ọrụ ,gwọ, ejirila Steve Davies nke Lucy Faithfull Foundation dee otu isi. A na-akpọ ya "Ihe Nlere Ntanetị Ntanetị na Mmejọ Mmekọahụ". Isi pụtara na Na-arụ ọrụ na ndị mmadụ na-emejọ Mmejọ Mmekọahụ: Nduzi maka Ndị Ọrụ. Nke a bipụtara Routledge na February 2017 ma nwee ike zụta Ebe a. I nwekwara ike ịgụ a akụkọ gbasara ya.
Dr Darryl Mead, Onye isi oche nke wardgwọ Ọrụ publishedgwọ bipụtara akwụkwọ na "Ihe ize ndụ ndị na-eto eto na-eche dị ka ndị na-eri Porn ”. E bipụtara nke a Addicta: The Turkish Journal of Addictions na njedebe 2016 na ederede zuru ezu dị maka n'efu.
Na August 2016, Gary Wilson, onye ọrụ nyocha na-asọpụrụ na The Reward Foundation, dekọtara akwụkwọ na 7 US Navy dọkịta na psychiatrist nke e bipụtara na akwụkwọ akụkọ "Ahụike Behavioral": Ihe Ịntanetị Ịntanetị Na-akpata Mmekọahụ Mmekọahụ? Nyochaa na Akụkọ Ọgwụ"Bụ n'efu site n'aka Ahụhụ Behavioral mkpokọta. Nke a bụ kasị ewu ewu akwụkwọ e bipụtara na Behavioral Sciences.
Gary Wilson edewokwala akwụkwọ edemede bụ isi nke ga-eduzi nduzi maka nchọpụta n'ọdịnihu na mpaghara mmebi ihe na-akpali agụụ mmekọahụ. Ọ bụ “Kwụsị Ihe Ndị Na-akpali agụụ mmekọahụ n'Intanet Na-adịghị Ala Ala Iji Kpughee Mmetụta Ya” na e bipụtara ya Addicta, The Turkish Journal of Addictions, na 2016. Njikọ ahụ na-enye ohere ịnweta ọmụmụ zuru ezu.